Chromecast dia fahombiazana any Etazonia | Androidsis
Chromecast no fitaovana fanindroany fivarotana faharoa be indrindra any Etazonia
alexis martinez | | Fitaovana hafa, Streaming
Ny fitaovana Chromecast an'i Google dia malaza be any Etazonia. Na dia nivoaka aza ny vokatra dia mety ho ilay fitaovana streaming malaza indrindra izy io, ankehitriny tsy dia malaza loatra izy io, satria misy safidy maromaro mitovy amin'ity dongle HDMI ity izay mifandray mivantana amin'ny TV. Porofon'izany ny fahitana ny Fire TV Stick avy any Amazon na ny R3500 avy amin'ny mpanamboatra ROKU.
Ary ivelan'ireny dongles HDMI ireny dia ahitantsika safidy maromaro amin'ny streaming miaraka amin'ny fitaovana hafa, toy ny Amazon's FireTV na Apple's Apple TV. Nefa na izany aza, Chromecast no fitaovana fampidinana entana faharoa be mpividy indrindra any Etazonia.
Araka ny tatitra nataon'ny Parks Associates farany teo, orinasa iray mivarotra fikarohana momba ny varotra sy fanadihadiana momba ny indostria momba ny vokatra onenana sy ny fahitan'ny mpanjifa ireo vokatra ireo, ireo hevitra ireo, ny toerana voalohany ao amin'ilay lisitra Ny fitaovana mametaka fitaovana be mpividy indrindra any Etazonia no mitarika. avy amin'ny gadget noforonin'i ROKU, arahin'ny Chromecast an'i Google, arahin'i Amazon's Stick.
Ireo fitaovana telo ireo dia mandrafitra ny 86% amin'ny varotra tsenan'ny fitaovana streaming. Fa raha mijery an'io isan-jato isan-karazany io isika dia mahita fa ny fitaovana Roku dia mitentina 34% amin'ny varotra, raha toa kosa Google dia manana 23%. Tsara ny manamarika fa ny angon-drakitra dia mifototra amin'ny fitaovana mavitrika sy vokatra nalefa nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny fahavitan'ny fianarana.
Tsy misy fisalasalana Chromecast dia fahombiazana ao amin'io firenena io. Fitaovana kely iray ho an'ny € 35 fotsiny izay mahatonga ny fahitalavitra ho hendry kokoa noho ny safidy isan-karazany ao amin'ny magazay fampiharana Google. Raha mbola tsy fantatrao hoe inona ilay Chromecast ary inona no mety ananan'ity gadget kely ity dia aza adino Ity lahatsoratra ity izay navoakanay tamin'ny androny momba ny rindranasa dimy mba hahazoana tombony betsaka amin'ity fitaovana Google malaza ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Chromecast no fitaovana fanindroany fivarotana faharoa be indrindra any Etazonia
Luis Csizarre dia hoy izy:
Jennifer Becerril no fitaovana nolazaiko anao tamin'ny fotoana hafa.
Valiny tamin'i Luis Cßizarre
Jennifer becerril dia hoy izy:
Misaotra an'arivony i Luis Cßizarre, hovidiko io.
Valiny tamin'i Jennifer Becerril
Manome anao hafatra manimba tena i Kaboom hizara amin'ny olona rehetra
OnePlus 2 dia mandray ny fanavaozana OTA hanamboarana Stagefright